Maareeyaha Madbacadda Qaranka Oo Xukuumadda Ku Bogaadiyay Lacagtii Giimbaarta Ee Sanaag laga Bedalay | Salaan Media
Maareeyaha Madbacadda Qaranka Oo Xukuumadda Ku Bogaadiyay Lacagtii Giimbaarta Ee Sanaag laga Bedalay
“Reer Sanaagoow lacagtii Giimbaarta waa la idinka bedalay hawl weyn ayay Xukuumaddu qabatay ee Idinkuna lacagtii La Bedelay Ka kaaftooma”
“Waxyaabihii Aanu UDUB Kaga Baxnay Waxa ka Mid ahaa In Lixda Gobolba laga isticmaali jiray Lacago kala Jaad ah”
HARGEYSA(SM)- Maareeyaha Guud ee Madbacadda qaranka Mudane Cabdilaahi Maxamed Jaamac (Carey) ayaa xukuumadda Somaliland ku ammaanay tallaabadii ay todobaadkii hore kaga bedashay Lacagtii giimbaarta ahayd magaaladda Ceerigaabo ee gobolka Sanaag.
Maareeyaha Madbacadda Qaranka oo maanta xafiiskiisa ugu waramayay qaar ka mid ah Saxaafadda ayaa sheegay in lacagtii giimbaarta ahayd ay la daa-degtay dhaqaalihii gobolka Sanaag, waxaanu tilmaamay in khayraadka dalka lagu bedalan jiray sida Beeyadda, kalluunka iyo xoolahaba.
“Waxaan doonayaa inaan halkan Mahad naq uga jeediyo Madaxweynaha Somaliland iyo Xukuumaddiisa lacagtii giimbaarta ee laga bedelay dhawaan gobolka Sanaag. Lacagtaasj oo ahayd aafadii ragaadisay ee la hadhay dhaqaalaha gobolka Sanaag oo xiligan laga bedalay. Runtii degmooyinka Ceel-afweyn iyo Gar-adag hore ayay uga sii tabaabushaysteen oo ay iska bedeleen lacagtii giimbaarta ahayd.balse magaaladda Ceerigaabo oo ah xarunta gobolka Sanaag ee ganacsiga u weyn ee gobolku ka socday ayay markii hore lacagtaasi taalay.
Waxay ahayd lacag waraaqo ah oo la iska soo samaysanayo oo khayraadkii ugu balaadhnaa ee dalka lagula wareegayay haddii ay tahay beeyaddii, adhigii iyo kalluunkii. Lacagtaasi waxay ahayd mid aan fadhiyin oo maalin walba la doonayay in dadka lagu dhaco,”ayuu yidhi Maareeyaha Guud ee madbacadda Qaranku.
Md. Cabdilaahi Maxamed Jaamac waxa uu tilmaamay in xukuumadda madaxweyne Siilaanyo qaaday tallaabo weyn oo ay ugu hiilisay shacbiga gobolka Sanaag oo lacagta giimbaartu hantaaqooyin dhaqaale ku haysay.
“Waxa kale oo aan u mahad naqayaa Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Guddoomiyaha Baanka dhexe ee Somaliland oo dedaal badan u galay sidii lacagtii giimbaarta looga tir-tiri lahaa gobolka Sanaag oo uu xog-ogaal u ahaa dhibtii haysatay shacbiga maadaama oo ka mid yahay masuuliyiinta ka soo jeeda gobolkaas.”ayuu yidhi Maareeye Cabdilaahi Carey.
Maareeyaha Madbacaddu waxa uu ku dooday in ay bedelka lacagta giimbaarta ee gobolka Sanaag ay ka mid ahayd waxyaabihii ay xisbiga KULMIYE ugu biireen xubno ka mid ahaan jiray Gudidii fulinta ee xisbigii UDUB oo uu isagu ka mid ahaa, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxa kale oo aan ku faraxsan nahay lacagtan giimbaarta ee gobolka Sanaag waxay ka mid hayd haddii aanu ahayn xubnihii gudida fulinta ee xisbigii UDUB sideeda sanadood ku jirtay xsibigaas, sababihii aan uga baxnay UDUB waxa ka mid ahaa lacagtan giimbaarta oo kale oo maalintii aan UDUB ka baxay waxaan idhi “UDUB Waxaanu uga baxnay wax la yidhaahdo kala jaad. Waxaanan xiligaasi tusaale u soo qaatay Boorame oo lacagta Birta laga isticmaali jiray, Gabiley illaa Sheekh oo Lacagta Somaliland qaadan jirtay, Burco oo lacagtii shanta boqol ahayd ee giimbaarta qaadata iyo Sanaag oo laga isticmaali jiray kunka shilin ee lacagtii giimbaarta. Markaa waxa lixda gobolba taalay lacago kala jaad ah.”
“Waxaan mar labaad Madaxweynaha uga mahad celinayaa inuu codsigii berigaas aanu u soo jeedinay inuu fuliyay oo maanta goboladda dalka oo dhan laga isticmaalo lacagta shilinka Somaliland,”ayuu yidhi Maareeyuhu.
Cabdilaahi Maxamed Jaamac waxa uu u soo jeediyay dadweynaha Gobolka Sanaag inay isticmaalaan oo kaliya shilinka Somaliland oo aan la dhinac wadin lacagtii la bedelay ee giimbaarta ahayd.
“Reer Sanaagoow lacagtii giimbaarta waa la idinka bedalay hawl weyn ayay xukuumaddu qabatay ee idinkuna tii kale ee dhaqaalihiina la degtay ha isticmaalina ee sidaas uga kaaftooma,”ayuu yidhi Maareeyaha Guud ee Madbacadda qaranku.